वरिष्ठ चिकित्सक मधु घिमिरे लेख्छन्– सांसदहरु डाँकाको समूहमा परिणत हुँदैछन् « GDP Nepal
( Monday, September 28, 2020)
वरिष्ठ चिकित्सक मधु घिमिरे लेख्छन्– सांसदहरु डाँकाको समूहमा परिणत हुँदैछन्
Published On : 25 January, 2019 12:43 pm
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा विधेयक आफूसँगको सम्झौता विपरीत माफियाको इशारामा ल्याएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी १६ औं अनसनमा छन् ।
केसीको अनसन १७ औं दिनमा पुगिसक्दा पनि सरकारले कुनै रेस्पोन्स गरेको छैन भने संसदबाट पेलेरै विधेयक पारित गर्ने नियत उसको देखिन्छ । तर, नागरिक समाजबाट केसीप्रति सहानुभूति र समर्थन गर्नेहरुको आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा प्रष्टै देखिन्छ । यीमध्ये एक हुन्– प्रसिद्ध चिकित्सक मधु घिमिरे ।
हाल केही समयदेखि भारतको नयाँ दिल्लीमा बस्दै आएका घिमिरे नेपालमा नाम चलेका चिकित्सकमा गनिन्छन् । उनले फेसबुकमा लेखे– अपवाद छाडेर अधिकांश सांसदहरु डाँकाको समूहमा परिणत हुँदैछन् ।
प्रस्तुत छः उनको टिप्पणी जस्ताको तस्तैः
देशको दुर्भाग्य ! आज संसद् दुई चारजना देशभक्तहरु छोडेर सबै डांकै डांकाहरुको समूहमा परिवर्तन भएको छ । तथाकथित कम्युनिष्ट भनाउँदाहरुले हाम्रो जस्तो समाजमा संसदको अर्थहीनता औंल्याएरै छाडे !! अब संसद मुठभेडको अखाडामा परिवर्तन हुंदैछ रे !
यस्तै उनले अर्को स्टाटश यस्तो पोष्ट गरेका छन्ः
आज म यदि नेपाली कांग्रेसको सभापति भएको भए प्रचण्ड भन्ने डांकालाई मेरो जÞबाफ यस्तो हुन्थ्योः
नेका व्यक्तिगत तथा पार्टीगत नीहित स्वार्थ हेरेर संसदभित्र छिर्दैन । नेकाको मूल एजेण्डा राष्ट्रलाई राम्रो बाटोमा लगाउने हो । त्यस एजेण्डा अन्तर्गत नेपाली कांग्रेस गोविन्द केसी जस्ता देशभक्तहरुले देखाएको मार्ग समाएर लम्किन सदा तत्पर रहन्छ ।
अर्थतन्त्रको फेरिँदो प्रवृत्तिः श्रम स्वीकृति ९९% घट्दा पनि रेमिट्यान्स २३% बढ्यो !
काठमाडौं । कोरोना कहरसँगै नेपालको वैदेशिक मुद्रा आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स घट्ने आकलन गरिए पनि
ठेकेदारहरुलाई ६५ अर्ब अपुग, खतिवडालाई भेटेर दुखेसो पोखे
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई
स्कुले विद्यार्थीलाई ९९ रुपैयाँमै टेलिकमको सीयूजी, ग्रुपभित्र असिमित कुराकानी सुविधा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ९९ रुपैयाँमै सिम उपलब्ध गराउने गरी स्कुले विद्यार्थीका लागि आकर्षक अफर